नो बलमा दौडेर रन लिन खोज्दा बादल भए 'रनआउट' ! - Nepal Face
निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन सशस्त्र प्रहरीलाई गृहमन्त्री थापाको निर्देशन
नेकपा फुटेकाे छैन : गृहमन्त्री थापा
मांसाहारी आन्दोलन गर्ने प्रचण्डलाई चिडियाखानामा थुन्ने गृहमन्त्री थापाकाे चेतावनी
गृहमन्त्री बादलको सांसद पदसँगै मन्त्री पद पनि गुम्यो
निर्मल बाबु लामिछाने / काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा चिरपरिचित नाम हो रामबहादुर थापा 'बादल' । कतिपयले रामबहादुर थापा मात्र भनेर चिन्छन् त कसैले बादल मात्र भने पनि चिन्ने गर्छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रलाई लत्याएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुरको नाम पार्टीसंगै बदलिएको छ । माओवादीमा रहँदा बादल रहेका रामबहादुर एमाले प्रवेश गरेपछि थापा मात्रै हुन पुगेका छन्।
बादल यस्तो नाम हो जसले गगनमा रहेको सूर्यलाई समेत छेकेर धर्तीमा रहेका जीवित प्राणीहरुलाई शितलता प्रदान गर्छ। बादलले बर्षा गराउछ, बादलकै कारण मेघ गर्जिन्छ आदी ... यस्तै अलौकिक र उदेश्यमुलक कार्य गर्ने भएर बादललाई बादल भनिएको हुनुपर्छ। यीनै बादलको उदेश्य र कार्यमा अचम्मित भएको तत्कालीन माओवादीले रामबहादुर थापालाई पनि बादलको उपमा दिएको थियो।
उतिबेला नेकपा माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका बादल पछिल्लो समय माओवादी नै परित्याग गरेर एमालेमा रहेका छन् । गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई साविककै अवस्थामा ब्युत्याइदिएपछि गृहमन्त्री बादलले एमालेलाई रोजेका थिए।
बादलको यही निर्णयले केहीदिन माओवादीमा खैलाबैला नै मच्चिएको थियो भने यता एमालेमा पार्टीका बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल उनको आगमनले खुसी भएका थिएनन् । तर, आफ्नो पार्टीमाथि घात गरेको भन्दै माओवादीले बादलको राष्ट्रिय सभाको सदस्य पद पनि खारेज गरिदिएको थियो । तर, सांसद पदबाट खारेज भएसंगे स्वत मन्त्री पद गुमाएका बादललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन सोही पदमा नियुक्ति गरे।
जब बादलले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरे तब उनलाई संकट आइपर्यो, कहिले सरकार अल्पमतमा पर्यो, कहिले पार्टीभित्रका अन्य सदस्यहरुले डाह गरे। तर अध्यक्ष ओलीको साथ पाएका बादल पुन आफ्नो मन्त्रीपद बलियो बनाउन राष्ट्रियसभाको चुनावमा लड्न तयार भए। एमालेले सांसद पद खारेजीसँगै मन्त्री बनेका बादललाई अहिलेको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा जिताउने भन्दै उमदेवारी दिन लागाएको थियो।
विपक्षी गठबन्धनका खिमलाल देबकोटासँग चुनाव लडेका बादल अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएसँगै उनको आगामी दिनहरुको राजनीतिमाथि ठूलो ग्रहण लागेको छ । हिजो निर्वाचनको परिणाम आउनु भन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री बादललाई गैरसंबैधानिक भन्दै नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । अबका दिनहरुमा बादल न मन्त्री रहे न सांसद रहे न आफूलाई गृहमन्त्री बनाएको मओवादी पार्टी नै रह्यो । अबका दिनहरुमा गृहमन्त्री बादल कुन रुपमा कतातिर बाट अगाडि बढ्छन् त्यो त हेर्न नै बाँकी छ।
कहिले काहीँ क्रिकेट खेलमा हुन्छ नी नो बलमा पनि आउट ! तर नो बलमा आउट त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला ब्याट्सम्यान क्रिज छाडेर दौडिदै रन लिन खोज्छन् । यस्तै भएको छ अहिले बादललाई मओवादीको क्रिजमा सानदार सेन्चुरीसहितको ब्याटिङ गरिरहेका बादल एमालेमा आफै रन आउट हुन पुगे जोडीमा तालमेल नमिल्दा।
# गृहमन्त्री रामबहादुर थापा # राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन
कोरोना महामारीका बीच आउन लागेको आ.ब २०७८/०७९को बजेट जनउत्तरदायी बन्न सक्ला ?